Gịnị Bụ Anụ Ọhịa Nwere Isi Asaa nke E Kwuru Okwu Ya ná Mkpughe Isi 13? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Ukrainian Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Anụ ọhịa nwere isi asaa nke e kwuru okwu ya ná Mkpughe 13:1 nọchiri anya ọchịchị niile e nwere n’ụwa.
O nwere ikike, nwee ocheeze, na-akpakwa ike. Nke a gosiri na ọ na-achị achị.—Mkpughe 13:2.
Ọ na-achị “ebo niile na ndị niile na asụsụ niile na mba niile.” N’ihi ya, ọ karịrị otu ọchịchị na-achị obodo.—Mkpughe 13:7.
O nwere ihe niile anụ ọhịa anọ e kwuru okwu ha na Daniel 7:2-8 nwere, ma ihu agụ owuru, ụkwụ anụ ọhịa bea, ọnụ ọdụm, ma mpi iri. Anụ ọhịa ndị ahụ e kwuru okwu ha n’amụma Daniel pụtara ndị eze dị́ iche iche ma ọ bụ alaeze dị́ iche iche, ndị ga-achị ma ibe ha chịchaa. (Daniel 7:17, 23) N’ihi ya, anụ ọhịa ahụ e kwuru okwu ya ná Mkpughe isi 13 nọchiri anya ọchịchị niile.
O si “n’oké osimiri” pụta. Ọ pụtara na ọ bụ n’etiti ụmụ mmadụ ndị na-anaghị erubere Chineke isi, ndị nọ́ n’ọgba aghara, ka e si enweta ndị ọchịchị ụmụ mmadụ.—Mkpughe 13:1; Aịzaya 17:12, 13.
Baịbụl kwuru na aha anụ ọhịa ahụ ma ọ bụ nọmba ya bụ 666, kwuokwa na ọ bụ “nọmba nke mmadụ.” (Mkpughe 13:17, 18) Ihe a a kpọrọ ya gosiri na anụ ọhịa ahụ e kwuru okwu ya ná Mkpughe isi 13 gbasara ụmụ mmadụ, ọ bụghị ndị mmụọ ọjọọ ma ọ bụ mmụọ a na-anaghị ahụ anya.
Ọ bụ eziokwu na mba dị́ iche iche anaghị ekwekọrịta n’ọtụtụ ihe, ma ha niile kwekọrịtara na ha ga na-achị achị kama ikwe ka Alaeze Chineke chịwa ha. (Abụ Ọma 2:2) Ha niile ga-ejikọta aka lụso Jizọs Kraịst na ndị mmụọ ozi Chineke agha n’Amagedọn. Ma, a ga-ebibi ha niile n’agha ahụ.—Mkpughe 16:14, 16; 19:19, 20.
“Mpi iri na isi asaa”
Ọnụ ọgụgụ ụfọdụ e dere na Baịbụl nwere ihe ha nọchiri anya ha. Dị ka ihe atụ, asaa na iri pụtara ihe zuru ezu. Gịnị ga-enyere anyị aka ịghọta ihe “mpi iri na isi asaa” nke anụ ọhịa ahụ e kwuru okwu ya ná Mkpughe isi 13 pụtara? Ọ bụ anụ ọhịa ọzọ na-acha uhie uhie nke nwere isi asaa na mpi iri. Mkpughe isi 17 kpọrọ ya “onyinyo nke anụ ọhịa ahụ.” (Mkpughe 13:1, 14, 15; 17:3) Baịbụl kwuru na isi asaa nke anụ ọhịa ahụ na-acha uhie uhie pụtara “ndị eze asaa,” ma ọ bụ ọchịchị dị́ iche iche.—Mkpughe 17:9, 10.
N’ihi ya, isi asaa nke anụ ọhịa ahụ e kwuru okwu ya ná Mkpughe 13:1 nọchiri anya ọchịchị asaa a ma ama ndị kpara ike n’ụwa, bụ́ ndị kpagbukwara ndị Chineke. Ha bụ ọchịchị Ijipt, Asiria, Babịlọn, Midia na Peshia, Gris, Rom, na Briten na Amerịka. Ọ bụrụ na mpi iri ahụ nọchiri anya mba niile na-achị onwe ha, ma ndị ukwu ma ndị nta, okpueze iri ahụ na-egosi na ọ bụ n’otu oge ahụ ọchịchị ndị ahụ na-akpa ike n’ụwa chịrị ka mba ndị ahụ na-achị onwe ha na-achịkwa.